Viila Soomaliya oo ka hadashay in muqdisho ay ka soo degto diyaarad siday Fahad Yaasiin. – XAMAR POST
Viila Soomaliya oo ka hadashay in muqdisho ay ka soo degto diyaarad siday Fahad Yaasiin.
By Mohamed Abdi On Sep 17, 2021
Agasimaja Warfaafinta Madaxtooyada Abirashiid ayaa sidan yiri” Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ka xuntahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee Dawladda Jabuuti ay garoonka diyaaradaha Jabuuti ku xannibtay Lataliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha JFS Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Saraakiisha Soomaaliyeed ee wehelisa.
Waxaan u sheegeynaa Dowladda Jabuuti in ay masuuliyiintaas u fududeyso safarkooda, sidoo kale ay masuul buuxda katahay wixii dhibaato ah oo soo gaara amnigooda shakhsiga ah, anaga oo ka xun faragalintan qaawan ee xadgudubka ku ah labada dawladood iyo labada shacab ee walaalaha ah.
Lataliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha JFS Mudane Fahad Yaasiin wuxa uu ka qayb galayaa shirka Amniga Qaranka oo barri oo ay taariikhdu tahay 18-ka Sebteembar, 2021 lagu qaban doono magaalada Muqdisho.
DEG DEG- Xildhibaan Mahad Salaad”Dalkaaga iyo dadkaaga marka aad dambi ka gasho xitaa diyaaraduhu waa ka cararayaan in ay ku qaadaan. Fahad